Maxay tahay sababta Cabdiweli Gaas dib isugu sharaxayo doorashada 2019? – FAALLO • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Maxay tahay sababta Cabdiweli Gaas dib isugu sharaxayo doorashada 2019? – FAALLO
Maxay tahay sababta Cabdiweli Gaas dib isugu sharaxayo doorashada 2019? – FAALLO
December 15, 2017 - By: Maxamed Cismaan
Midig: Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad, Wasiir Cabdullaahi Timacadde, Afhayeenka Baarlamaanka Axmed Cali Xaashi iyo Madaxweynaha Puntland
Waxaa lagu wadaa in muddo 12 bilood ah kadib maamulka Puntland ay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha taas oo ay ka horeyn doonto soo xulida Xildhibaanada cusub oo bilaaban doonta 10 bilood kadib, marka lakaladiro Xildhibaanada golaha wakiilada. Doorashada 2019 ayaa leh xiiso ka duwan kuwii hore marka laeego arrimo badan.
Faaladan kooban ma ahan mid si weyn loogu qaadaa dhigi doono arrimaha doorashada, inkasta oo qalinleyda Horseed Media ay akhristayaasha u ballan qaadi doonaan faallooyin iyo warbixino ku saabsan tartanka muddo sanad ah kadib dhici doona.
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas ayaa marar badan iyo madalo kala duwan ka sheegay in aanu dooneyn in uu dib isu sharaxo, sidoo kale guusha iyo guuldarrada maamulkiisa ayuu horey ugu xiray sida uu u hirgeliyo nidaamka dimoqraadiyadda ama xisbiyada badan.
Haddaba waxaa soo baxdey in Madaxweyne Cabdiweli Gaas uu wax ka beddalay aragtidiisi ku aadanayn tartanka doorashada Puntland ee 2019.
Maxay tahay sababta Madaxweynuhu aragtidiisa u bedalay?
Xildhibaano ay hormuud u yihiin shirguddoonka Baarlamaanka, qaar kamid ah guddiyada joogtada ah ee Golaha Wakiilada, xubno ka tirsan Golaha wasiirada ayey u muuqatey fursad ay saameyn weyn ku yeelan karaan siyaasadda iyo doorashada 2019 isla markaana ay hadda diyaarin karaan musharaxa Madaxweynaha, ku-xigeenkiisa iyo weliba Xildhibaanada imaan doona, Siyaasiyiintan ayaa waxaa dhiiri geliyey damac la’aanta Madaxweynaha ee uu marar badan sheegay in aanu ahayn musharax, waxaana ay is tuseen in ay ka faa’ideysan karaan arrintan.
Wararka yaala Garoowe ayaa sheegaya in qorshahan ay hormuud ka yihiin Shir-guddoonka Baarlamaanka, Xubno ka tirsan Golaha Xukuumadda iyo Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo isagu ka tirsanaa Baarlamaanka Puntland tan iyo sanadkii 1998, oo hadda doonaya in uu isu sharaxo Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Qorshahan waxaa Injineer ka ahaa Xildhibaan Saadiq Abshir oo leh khibrad durugsan oo ku aadan doorashooyinka Puntland, waxaana uu sheegay in haddii aan talada hadda lala wareegin doorashadu noqon doono khamaar waxkastana laga filan karo, laakiin ay wanaagsan tahay in hadda la diyaariyo qorshihii talada lagula wareegi lahaa.
Kooxdan isku xiran ayaa bilaabey olole ah in la dhiso guddiga xalinta khilaafaadka xilliga soo xulidda Xildhibaanada, guddiga Xalinta khilaafaadka oo ka kooban 7 ayey ku talo galeen in Madaxweynuhu soo magacaabo 3 Xubnood guddoomiyaha Baarlamaankuna magacaabo 4 xubnood, si ay u soo saaraan Xildhibaanada ay doonayaan, kuwaasoo dooran doona Madaxweynaha. Akhri maqaal horey Horseed uga qortey.
Qorshahan waxaa ka horyimid in badan oo kamid ah Xildhibaanada hadda jira, Madaxweynaha Puntand, Ku-xigeenkiisa iyo weliba siyaasiyiin hore uu ka mid yahay Madaxweynihii hore ee Puntland Dr Cabdiraxmaan Farooleoo hadda ah Xildhibaan ka tirsan Aqalka sare. Xildhibaanada Baarlamaanka oo lagu bartey in ay tixgelin siiyaan jeebkooda, ayaa la isku dayey in qorshahan laga gado iyada oo dhaqaalaha laga soo qaadayo mid kamid ah musharixiinta xilka Madaxweynaha ee doonaya in lookarkariyo dheriga intaanba la gaarin xiliga doorashada.
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas waxaa u soo baxdey in qorshahan iyo ololaha doorashada ee durba ku bilowdey uu khatar yahay waxaa u soo baxdey arrimo badan oo masiirka dalka ah in gacantiisa ka baxayso waxaana u caddaatey in uu ku xalin karo oo keliya in uu caddeeyo in uu yahay Musharax 2019 cidkasta oo xukuumadiisa kamid ahna ay isaga daba fariisato. Kadib safarkii Madaxweynuhu uu kaga soo laabtey magaalada Muqdisho waxa uu kulan la qaatey qaar kamid ah Xildhibaanada ku dhaw waxaana u caddeeyey in uu yahay Musharax awooda magacaabista guddiga khilaafaadkana isagu lee yahay maadaama dalka aysan ka dhacayn doorasho hal qof iyo hal cod ah sida ay u lahaayeen Madaxweynayaashii ka horeeyey awooda magacaabista guddiga khilafaadka. Arrintan waxay caqabad ku noqotey Siyaasiyiinta doonaayey in ay afduubtaan doorashada 2019, isla markaana doonaayey in hilibka ay cuni donaan hadda dabkiisa sii shidaan.
Sida Horseed Media ogaatey waxaa demay oo shiiqay ololihii la doonaayey in guddiga khilaafaadka ay dhisaan Baarlamaan la kala diri doono, kadib markii Madaxweynuhu caddeeyey inuu yahay musharax.
Dadkale ayaa ku doodaya in Cabdiweli Cali Gaas uu horeyba damacu ugu jirey ee ay ka ahayd arrimo siyaasadeed iyo in uu ogaado waxyaabo badan oo ka qarsoonaan lahaa haddii uu horey ugu dhawaaqi lahaa musharaxnimadiisa. Aragti kale ayaa sheegaysa in Cabdiweli Gaas damac uga jirey oo doonaayey in xilka lookordhiyo si uu isugu dayo in uu dalka doorashooyin gaarsiiyo, taas oo ay u soo baxdey in aysan suurtagal ahayn taasna ay sababtey in uu hadda la soo baxo calankiisi qarsoonaa.
Magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe waxaa laga dareemayaa ololaha doorashada oo ay ka dhiman tahay 12 bilood oo keliya, waxaana hadda doorashada xiiso u sii yeelaya in Musharax Cabdiweli Gaas ka mid noqdey Musharxiinta 2019 oo horey shaki looga qabey, waxaana la is weydiinayaa in uu noqon doono Madaxweynihii saddeexaad ee xilka haya ee doorashada looga adkaado.